काठमाण्डौं/ सफल फिल्म साईली युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गत बर्ष हलमा रिलिज भएको चलचित्र ‘साईली’ यतिबेला दीपावलीको अबसर पारेर यूट्यूबमा रिलिज गरिएको हो । सार्बजनिक पश्चात् फिल्मले युट्युबमा राम्रो सफलता पाएको छ । २ दिनको अवधीमा फिल्मलाई १४ लाख बढी पटक हेरिएको छ भने यो समाचार तयार गर्दैगर्दा फिल्म युट्युब नेपाल ट्रेन्डिङको दोश्रो स्थानमा छ । यस्तै फिल्मलाई लाईक गर्नेको संख्या ४७ हजार बढी हुदा ४३ हजार बढिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । १७ सय डिसलाईक गर्नेको संख्या रहेको छ । गायक हेमन्त रानाको गीत ‘साईली’लाई दर्शकले अत्याधिक रुचाइएपछि गायक राना र नायक गौरव पहारी मिलेर ‘साईली’ फिल्म निर्माण गरेका थिए । जुन फिल्म नेपालमा गत बर्ष रिलिज भएको थियो भने अन्य बिभिन्न देशहरुमा पनि बिशेष शो गरिएको थियो । यो फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् भने चलचित्रमा उनकै लेखन रहेको छ ।
काठमाडौं – चर्चित हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) अहिले चितवनको भरतपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काममा व्यस्त छन् । कलाकरितासँगै समाज सेवामा समेत सकृय रहेका उनि अहिले क्रिकेट रंगशाला बनाउन दिनरात नभनि खटिरहेका छन् । यसैबीच हालै एक व्यक्तिले उनको मुर्ती बनाएको देख्दा धुर्मुस चकित परे । भरतपुर ४ बस्ने चित्रकार चित्र बहादुर श्रेष्ठले धुर्मुसको मुर्ती बनाएका छन् । मुर्ती हेर्दा दुरुस्तै धुर्मुस नै देखिन्छ । आफ्नो दुरुस्तै मुर्तीको तस्बिर आइतबार धुर्मुसले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् । भिडियो हेर्नुहोस्..
Posted in ब्यानर पोस्ट, स्वास्थ्य /जिबनशैली
काठमाण्डौं/ रायोको सागसँग जो कोही परिचित हुन्छन् । साग नरुचाउने सायदै नहोलान् । साग खाँदा भिटामिन पाइन्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । अहिले रायो साग पाइने मौसम हो। जाडो मौसममा सजिलै उपलब्ध हुने, चाँडो पाक्ने र स्वादिलो पनि हुने भएकाले रायोको सागको तरकारी लोकप्रिय मानिन्छ। रायोका साग बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ। यो स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अत्यन्त लाभदायक छ। के के फाइदा हुन्छ ? रायोको सागमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। रतन्धो, पुरानो बाथ, कफ आदिबाट बच्न यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। यसमा पाइने फोलिक र म्याग्नेसियमले मानव शरीरमा रहने विभिन्न विकारयुक्त वस्तुलाई बाहिर निकाल्छ। रायोको सागमा भिटामिन के प्रचूर मात्रामा पाइने भएकाले गर्भवतीलाई खुवाउँदा फाइदा हुन्छ। जाडोमा बाथका रोगीलाई हड्डी दुख्ने समस्या हुन्छ। रायोमा पाइने कपरले यो समस्यामा फाइदा पुर्याउँछ। रा
काठमाण्डौ । नायिका नीता ढुंगानाले चाडपर्व भन्ने बित्तिकै आमाको सम्झना आउने बताएकी छन् । उनले सबै कुरा आफुले सोंचेको जस्तो हुँदाहुँदै पनि आमाको सम्झनाले ती सबै कुरालाई फिका झैं बनाई दिने बताएकी छन् । उनले भावुक हुँदै एक अन्तरवार्तामा आमाको हातबाट टिका लगाउन नपाएको १० वर्ष भएको बताएकी छिन् । नायिका नीताले आफ्नी आमाको हातबाट टिका लगाएको अन्तिम दशैं सम्झंदै भनिन्,‘म त्यो बेला १८ वर्षकी थिएँ । त्यतिबेला मैले फिल्म गर्दै थिएँ । त्यो दशैं हेटौडाको थियो । र त्यो नै मेरोलागी अन्तिम दशैं थियो । त्यतिबेला पनि उहाँले अक्सिजन लिंदै हामीलाई टिका लगाई दिएर आर्शिबाद दिनु भएको थियो ।’ नीताको भनाई अनुसार उनकी स्वर्गीय आमा दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो । उनले आमा रोगी हुँदा पनि आमाको उर्जालाई सम्झंदै भनिन्,‘उहाँलाई जतिसुकै गाह्रो भएपनि जब चाडबाड आउँथ्यो तब उहाँमा छुट्टै उर्जा देख्न पाईन्थ्यो । घरको माहोल
नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । विनिमय दर भन्नाले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा विनियम गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझाउँदछ । दुई मुद्रा विचको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रालाई अर्को मुद्रामा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ । उदाहरणको लागी नेपालमा अमेरिक डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । आजको मुद्राको दर
एजेन्सी, २९ कात्तिक । पाकिस्तानी सेनाको आ क्रमणबाट ११ जना भारतीयकाे मृ ,त्यु भएकाे छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम द टाइम्स अफ इण्डियाकाे अनुसार ६/७ जना पाकिस्तानी सेनाले चलाएकाे गाेली लागेर ५ जना भारतीय सेना र ६ सर्वसाधारणकाे मृ, त्यु भएकाे छ । मृ,त्यु हुनेमा एक जना महिला पनि रहेकाे जनाइएकाे छ । शुक्रबार बिहान पाकिस्तानी सेनाले गरेको आ क्र मणमा उनीहरुको मृ,त्यु भएको हो । जम्मु कश्मिरको पुंछ, केरन र गुरेज क्षेत्रमा पाकिस्तानी सेनाले युह द्धविरा म भंग गरेको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको छ । बारमुला क्षेत्रमा पाकिस्तानी सेनाको आ क्र मणमा परेर बिएसएफका सब इन्स्पेक्टर राकेश डोभालको मृ,त्यु भएको छ । सो क्षेत्रमा अन्य २ जना जवानको मृ. त्यु भएको छ । अन्य ३ जवान र ८ भारतीय नागरिक गम्भीर घा,इते भएका दैनिक भास्करले जनाएकाे छ । उनीहरुको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । झ डपमा पाकिस्तानी सेन
नेपालीहरुको महान पर्व तिहारको अवसर पारेर शिशिर भण्डारी अभिनित नेपाली मर्मस्पर्शी सर्ट मुभि युट्य्बमा आएको छ । भाईटिका शिर्षको उक्त सर्ट फिल्ममा बिदेशिएको दाई र बेचिएकी चेलीको दर्दनाक कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ । शिशिर भण्डारीका साथमा सुनिशा बजगाई, देशभक्त खनाल, सारदा गिरी, लक्ष्मण राज अधिकारी, नरेश बिक्रम खड्का, सन्जय पौडेल, प्रशन्न डि.सी, मलाईका बस्नेत आदिको मुख्य भुमिका रहेको छ । बालकलाकारको रुपमा चलचित्रमा शिशिर भण्डारीका छोरा असिम भण्डारीले पनि पहिलो पटक अभिनय गरेका छन् । तिहारको समयमा सबैको मन जित्ने आशाले निर्माण गरिएको सर्ट फिल्ममा कथा शिशिर भण्डारीकै हो भने फिल्मलाई गोकुल अधिकारीले खिचेका हुन् । फिल्मलाई बिष्णु बुढाथोकीले पहिलो पटक निर्देशन गरेका हुन् (भिडियो हेर्नुस)